Bogga ugu weyn 20 Hustles Side Paying High ee Kanada hadda waad bilaabi kartaa
Miyaad rabtaa inaad Kanada ku taajirto? Qaado dhaqdhaqaaq dhinac ah si aad u dhammaystirto shaqadaada maalinlaha ah.
Waa tan wax ay tahay inaad aragto!
Sida laga soo xigtay sahan uu sameeyay Tom Corey, kaas oo lagu bartay caadooyinka 233 dadka hodanka ah. Wuxuu soo gaadhay gunaanadkan soo socda: 65% waxay lahaayeen 3 durdur oo dakhli ah, 45% waxay lahaayeen 4 durdurrood halka 29% ay lahaayeen 5 durdur oo dakhli ah.
Tom wuxuu sii raaciyay, 'saddex durdur oo dakhli ahi waxay umuuqdaan inay yihiin lambarka sixirka ee maalqabeennada iskood u sameeyay ee ku jira daraasadayda Rich Habits, laakiin inta dakhli badan ee aad abuuri karto, gurigaaga maaliyadeed wuxuu ahaan doonaa mid aamin ah iyo hanti badan abuuri doona '.
Si aad u gasho goobada taajiriinta, waxaad u baahan tahay in ka badan hal durdur oo dakhli ah.
Ma aragtaa sababta maqaalkan ay tahay in la akhriyo?
Baro wax ku saabsan jahawareerka dhinac ka jira oo lacag dheeraad ah ka heli kara Kanada.
Fiiri jadwalka dulucda hoose ee dulmar mawduucan.
Sida loo bilaabo Hustle Side?
Qof kastaa wuxuu u baahan yahay gacan -qabasho dhinac ah. Haa, dhammaanteen waan samaynaa!
Sideed u go'aamisaa xiisaha dhinaca si aad uga qayb qaadato?
Qaybtani waxay ku tusi doontaa sida aad u dooratid buuq dhinacaaga ah oo lacag dheeraad ah kaa siin doona canada.
Marka hore, qor waxa aad xiisaynayso oo dhan. Waxaad u baahan tahay in aad ka hesho xiisaha dhinacaaga si uu u guulaysto. Baro inaad ku darto shaqadaada maalinlaha ah. Kaliya wax aad u xiisayso ama a hiwaayad waxay noqon doontaa mid mudan in loo beddelo meherad.
Ta labaad, ma wax lacag ah ayaa la gelin doonaa? ma jiri doontaa suuq -geyn si aan u helo macmiilkayga koowaad? Tusaale ahaan, waxaad u baahan tahay inaad lacag ku maal gasho bilowga baloog adoo adeegsanaya martigelin iyo naqshado.
Saddexaad, jadwal u samee jadwalka dhinaca. Ma jiri doontaa waqti loogu talagalay shaqadan dhinac ka dib shaqadaada maalinlaha ah? Miyuu jiri doonaa khilaaf dan ah oo u dhexeeya shaqadaada maalinlaha ah iyo ganacsiga dhinaca?
Waqti u samee jimicsigaaga maalin kasta.
Ta afaraad, baro inaad xoogga saarto labada shaqo. In midba midka kale u gacan qaado waxay noqon kartaa masiibo. Ilaa inta geggaaga dhinac laga dhisayo, hubi inaad labadaba maamusho.
20 Hustles Side -Bixinta Sare ee Kanada
Kanada waxaa ka jira xamaasado badan oo loogu talagalay kuwa doonaya inay kasbadaan dakhligaas dheeraadka ah. Asal ahaan, buuqyada dhinaca ah ee bixiya heer sare oo ku habboon ayaa ka fiican kuwa weli kugu adkeynaya.
Annagoo tixgelinayna tan, waxaan u keenay shaqooyinkaas dhinaca ah oo ku siin doona xoogaa lacag ah oo leh walaac yar. Nala joog!
#1 U wad Shirkad wadaagista Ride
Wadista baabuur wadaaga wadaagga waa mid ka mid ah hawlaha ugu fudud ee laga bilaabi karo Kanada. Uber waa mid ka mid ah adeegyada ugu caansan.
Uber waxay u adeegtaa 17 magaalo oo Kanada ah. Aad bay u dabacsan tahay oo waxaad kasbataa markaad shaqayso. Saacadaha aad shaqayso ayaa go'aamin doona mushaharka. Tani waxay ka dhigeysaa inay tahay dhaqdhaqaaq dhinac sax ah.
Is -qoritaanku waa mid aad u fudud, kaliya haysato liisan iyo baabuur. Sidoo kale ogow inaad baabuurka u hagaajisid waxyeellada iyo duugga.
Waxaad Kanada ka kasban doontaa lacag dheeraad ah adiga oo u kaxeynaya shirkad wadaag-raac.
Ma ogtahay inaad noqon karto lacag lagu siiyay wadista baabuurkaaga?
#2 Ku iibi Farshaxanka etsy
Ma waxaad tahay hal -abuur waqti badan ku bixiya tijaabinta farsamooyinka cusub? Waxaa la joogaa waqtigii laga kasban lahaa tan sidii buuq dhinac ah.
Etsy waa madal kuu siineysa fursaddan inaad ku iibiso farsamooyinka gacanta lagu sameeyo.
Waa mid aad u dabacsan oo la adeegsan karo waxayna kaa dhigi kartaa lacag aad u badan haddii aad waxoogaa suuqgeyn ah u samayso alaabtaada.
#3 Bilow baloog
Haddii aad leedahay amar wanaagsan oo luqadda Ingiriisiga ah, waxoogaa ka fahanto baloog -ga, oo dooro niche aad loo raadsado, buuq cusub oo hodan ah ayaa hadda bilaabmay. Tani waa shaqo weyn oo ka jirta Kanada iyo meel kasta oo adduunka ah.
Baro xeeladaha sida lacag looga sameeyo baloog.
#4 Noqo Qoraal -qorayaal
Diiwaan -hayaha waa qof u roga duubista codka qoraal iyo qoraallo qoran. Haddii aad tahay khabiir ku takhasusay cilmiga caafimaadka, hore u soco, oo qor qoraallada caafimaadka.
Waxa kale oo aad u baahan tahay in aad yeelato xirfado qoris oo aad u fiican iyo maqal aad u xiiso badan.
Shaqadan dhinaceeda ah ee Kanada waxay si fiican u bixisaa oo waxay ku kasbataa lacag dheeri ah marka lagu daro shaqo kale.
Ma leedahay il faahfaahsan iyo aqoon fiican u leh luqadda Ingiriiska? Kadib, shaqada dib -u -akhrinta ayaa adiga kuugu fiican.
Si sax ah u sax khaladaadka naxwaha ee dukumiintiyada oo lacag ka hel xaggan xagga Kanada. Ilaa iyo inta laga helayo internet, waxaad ka shaqayn kartaa meel kasta oo adduunka ah.
Tusaale ahaan, Caitlin oo ka socota Meel -marinta Meel kasta wuxuu sameeyay wax ka badan $ 43,000 hal sano isagoo ah dib -u -akhriye. Tani waxay noqon kartaa adiga haddii aad joojin karto marmarsiiyo.
#6 Naqshadeynta Webka
Haddii aad ka raadinayso shaqo dhinaca baahida sare leh ee Kanada, naqshadeynta webka ayaa ka mid ah. Dhis meherad naqshadeynta webka adiga oo la shaqeynaya macaamiisha si aad u dhisto mareegaha. Xitaa waxaad ku iibin kartaa qaab-dhismeedyo hore loo sameeyay goobaha sida Etsy.
Akhri: 21 Siyaabo Sharci ah oo Lacag looga Sameeyo Kanada Kanada 2022
#7 Ku Iibi Alaabta Online
Iibinta internetka waa suuq caalami ah. Waa hustle dhinac ah lacag ka samee guriga Kanada.
Habka ugu fudud ayaa ah inaad ka samaysato dukaan online ah Soo iibso. Badeecaduhu waa kuwo dalwad leh oo aan lahayn wax alaab ah.
Soo -saaraha wuxuu ka shaqeeyaa dhoofinta, soo -celinta, iyo adeegga macmiilka, waxaad tahay uun dhexdhexaadiyaha isku xira macaamiisha.
Waa mashquul dhinac weyn ah iyo shaqo Kanada ka jirta oo lacag badan bixisa.
#8 Suuqgeynta saamileyda ah
Suuqgeynta iskaashatadu waxay asal ahaan kor u qaadeysaa badeecadaha dadka kale iyadoo kasbatay guddi iib kasta.
Suuqgeynta waxaa lagu samayn karaa oo keliya internetka. Kaliya ka shaqaalee waxoogaa hal -abuurnimo ah Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, oo lacag ka samee dhinacan Kanada ka socda.
Shirkadaha sida Amazon, Walmart, Sephora, Shoppers Drug Mart, iyo Buugaagta Indigo dhammaantood waxay leeyihiin barnaamijyo xiriir la leh oo aad ka qayb qaadan karto.
#9 Noqo Freelancer
Runtu waxay tahay in qof kastaa leeyahay xirfad qof diyaar u ah inuu bixiyo.
Goobaha onlaynka ah sida Fiverr, 99 naqshado, Upwok, Freelancer ayaa kumanaan qof siiya farsamooyinkooda.
Shirkado badan ayaa shaqaaleysiiya shaqaale fog si ay u yareeyaan kharashka.
Samee qiimahaaga oo ka samee $ 5 ilaa $ 1,000 mashruuc kasta.
Hore u soco oo lacag ka samee shaqadan dhinaca Kanada.
#10 Qaado Baaritaano Online ah
Qaadashada sahaminta onlaynku waa shaqo aad u wanaagsan oo mashquul badan Kanadiyaanka ayaa imbibed ku siinaya lacag dheeraad ah.
Waxaa jira goobo badan oo sahankan laga qaadi karo.
Kaliya fiiri boostadayada Ku Samee Lacag Arkiifyada Sahanka Online -ka.
#11 Noqo Hagaha Dalxiiska
Bixinta dalxiisyadu waa buuq dhinac aad u xiiso badan oo dad badani aysan ka fekerin.
Maxaa ka wanaagsan inaad tusto quruxda Kanada ee dalxiisayaasha?
Xitaa waad qorsheyn kartaa socdaalkaaga oo waxaad ku dhejin kartaa Safarrada Dadka Deegaanka kuwaas oo kugu xiri doona macaamiisha gudahaaga.
Waxaad ku samayn kartaa lacag aad u badan safar kasta oo u sarreeya $ 80 saacaddii.
#12 Maareeyaha Warbaahinta Bulshada
Inta badan bogaggan caanka ah ee Instragram, Youtube iyo Twitter waxaa maamula maamulayaasha warbaahinta bulshada. Mar baan u maamulay bog caan ah mushaharkuna aad buu u qancay.
#13 Noqo a Caawiyaha Virtual
Ganacsiyada badankoodu waxay u baahan yihiin dad meel fog ka shaqayn kara si ay u dhammaystiraan hawlaha fudud ee internetka.
Waxay qabtaan hawlo sida hubinta iyo ka jawaabista emaylka, hubinta waxyaabaha ku jira in la soo dejiyo, jadwalka hawlaha, abuurista nuxurka, diiwaangelinta, iwm.
Awoodda dakhliga ee dhinacan gig wuu sarreeyaa oo VA -yada waxay gaarayaan ilaa $ 3,000 bishii.
Weligaa ma jirtay lacag lagu siiyay akhrinta emaylka? Fiiri.
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska Archives Side Hustles - Goobta Hantida
#14 Macalinka Ingiriiska
Dhammaan waxa loo baahan yahay si ay u noqdaan macallin Ingiriis ah waa aqoonta Ingiriisiga aasaasiga ah oo aan ahayn wax la yaab leh. Waxaa jira aalado badan oo lacag wanaagsan ku bixiya dhinacan xiisaha barashada Ingiriiska.
Laga bilaabo VIPKids waxay bixiyaan ilaa $ 22 saacaddii ilaa English macalimiin. Waxa xiiso leh, tan waxaa lagu sameeyaa onlaynka iyo xawaarahaaga.
Tijaabi MagicEars, iyo QKid.
# 15 Qiimeeyaha Mashiinka Raadinta
Sharaxaadda shaqadu waa inay u shaqayso sidii mashiinka raadinta iyo qiimeeyaha webka.
Asal ahaan waxaad qiimeyn doontaa natiijooyinka mashiinka raadinta oo aad hubin doontaa inay buuxiyeen baahiyaha raadinta gaarka ah. Ujeeddada laga leeyahay buuqa ka jira Kanada waa in la hagaajiyo natiijooyinka raadinta ee adeegsadayaasha.
#16 Ku kasbasho Amazon Mechanical Turk
Mechanical Turk (MTurk) oo ay leedahay Amazon waa suuq laga helo nooc kasta oo shaqooyin yaryar ah. Kuwani waa shaqooyin mushahar leh.
In kasta oo mushaharku yar yahay, si kastaba ha ahaatee, haddii aad dhammaystiri karto hawlo badan dakhligu wuxuu noqon doonaa lacag dhan $ 50 illaa $ 100 bishii.
#17 Shabakadaha Imtixaanka iyo Barnaamijyada
Waxaad ku kasban kartaa lacag dheeraad ah adiga oo tijaabiya bogagga internetka iyo barnaamijyada Kanada. Shirkado badan ayaa lacag siiya si ay u soo booqdaan website -ka una bixiyaan warcelin.
Mushaharku caadi ahaan waa $ 10 20kii daqiiqo ee imtixaan kasta. Haddii macmiilku u baahan yahay wada hadal toos ah, mushaharka waa la kordhiyaa.
Isku day shabakadahaan shaqooyinka Tijaabinta isticmaalaha ($ 10 ilaa $ 60 halkii imtixaanba), Iskuday ($ 10 halkii imtixaan), Analysia ($ 10 halkii imtixaan).
#18 Iibi Koorsooyinka Online -ka ah
Khubarada meelaha gaarka ah waxay abuuri karaan koorsooyin onlayn ah waxayna ka iibin karaan dadka u baahan aqoonta noocaas ah.
Waxaad ka iibin kartaa koorsooyinka Udemy, Teachable, Skillshare, iyo kuwo kale oo badan.
Qaddarka lacagta ah ee laga samaynayo xaraashkan dhinaca onlaynka ah ee Kanada waa mid aan la soo koobi karin. Waayo? Sababtoo ah waa badeecad la iibin karo kumanaan jeer.
Abuurayaasha ugu sarreeya ee Udemy waxay kasbadaan $ 10k bishii.
Ma aha qorshe hodan ah oo hodan ah, laakiin waa hab dakhli oo joogto ah oo waara marka lagu ogaado oo lagu kalsoonaado.
#19 Kiro Baabuur leh Turo
Ganacsiga kireysiga baabuurku wuxuu u noqday mashquul dhinac walba ah iyo shaqo dad badan oo reer Kanada ah.
Isticmaalayaal badan ayaa kiraysta baabuurtooda, waxay u isticmaalaan lacagta ka soo baxda inay ku iibsadaan baabuur badan oo kiraysta.
Liiska baabuurta waa lacag la'aan madalkan waxaadna kasbataa 90% khidmadaha ay bixiyeen kiraystayaashu. Turo wuxuu bixiyaa dhammaystiran caymis.
Waa kan adeegga kirada baabuurka kale: Zipcar ma sharci baa mise waa khiyaano? Siduu Zipcar u shaqeeyaa?
#20 Iibi Sawirada
Indho iyo kamarad wanaagsan, waxaad ku socotaa inaad noqoto sawir qaade caan ah. Kadib, qaar ka mid ah xirfadaha suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa ka dhigi doona ganacsiga inuu dhakhso u iibiyo.
Waxa kale oo aad ku iibin kartaa sawirrada kaydka goobaha sida Shutterstock, Sawirrada Debaajiga, Sawirada Getty iyo iStockPhoto. Waxay kuu oggolaanayaan inaad geliso sawirradaada oo aad ku iibiso lacag.
Wali ku wareersan sida loo suuqgeeyo xirfadan? Akhri 20 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo Sawir Qaade.
Waxaad isku dari kartaa hawlo badan oo Kanada ka jira si aad u noqoto shaqo waqti-buuxa ah oo aad ku kasbato/kasbato lacag dheeraad ah.
Xiisadahaan iyo shaqooyinkan ayaa meesha ka saaraya baahida loo qabo ogolaanshaha shaqada maadaama lagu sameeyo internetka. Iyaguna waa sharci ah.
Ka hel lacagtan dheeraadka ah ee canada maanta oo iska bixi qaab nololeedka aad rabto!
Wareegga Wealth ayaa daneeya!
21 Hustle Side Paying Side High for Designers Interior - The…
21 Dhaqdhaqaaqa Lacag -bixinta Sare ee Korontada | Shaqooyinka Dhinacyada ah ee loogu talagalay…
17 Shaqooyinka Dhinacyada Kalkaaliyayaasha Lacagta Fiican bixiya
21 Dhaqdhaqaaqa Lacag -bixinta Sare ee Dadka Caajiska ah - Wareegga Maalka
Sida Lacag Loogu Sameeyo Guriga Kanada | Talooyin
Ahaanshaha dukaameystaha dahsoon waa fursad waqti-dhiman ah oo aad u dabacsan ardayda si ay u sameeyaan xoogaa lacag ah oo dheeri ah. Mid…